Repoman kinova 1.3 misy | Avy amin'ny Linux
Eddy Ernesto del Valle Pino mpanoratra ny Repoman_cli nandefa ahy ny kinova 1.3 an'ity script mahafinaritra ity namboarina tao Python mamorona repository manokana ao Ubuntu/Debian ary ento mody izy ireo.
Repoman_cli dia ilay script izay mandeha eto ambany PSC (Ivotoerana rindrambaiko azo entina) izay efa niresaka izahay taloha. Amin'ity kinova ity dia milaza amiko ny mpanoratra fa nanatsara ny kaody izy ka mandany loharano vitsy kokoa rehefa mamaha ny fiankinan-doha, satria nandany ny sasany 100 Mb. Ireto no fanovana:
Fampihenana ny fihinanana fahatsiarovana.
Hafainganam-pandeha rehefa mamaha ny fiankinan-doha amin'ny fonosana.
Ny script dia novonoina tamin'ny console tahaka ny lojika ary afaka jerena ny fomba fampiasana azy amin'ny fametrahana:
Tokony hazavaiko fa ity kinovan'ny Repoman dia tsy mifanaraka amin'ny PSC, satria ilay iray nozaraina dia nanana zavatra iray ihany koa izay nanala ny fahalalahana ary izany dia ny famoronana ny toerana anaovana ilay programa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Repoman kinova 1.3 misy
Ny rohy napetrakao dia diso elav.
Misaotra tamin'ny fitaterana azy, izao dia amboariko 😀
Froilan dia hoy izy:
Tsy azoko atao ny misintona azy, raha misy olona afaka mangataka anao aho mba andefaso izy amiko fdgonzalez@uci.cu
Valiny tamin'i Froilán
Hmmm, tsara, mety ho mora ho ahy io andro io 🙂
Miala tsiny raha mamelona indray ny lohahevitra taloha iray fa afaka manome rohy iray misintona azy ve ianao? (Tsy mety amiko ny rohy fampidinana na ny rohy web) Ary tiako ho fantatra ihany koa raha afaka misintona trano fitahirizana misy maritrano tsy mitovy amin'ny an'ny masinina amin'ny Internet ianao.
caco222 dia hoy izy:
Marina ... Mampihoron-koditra ho an'ireo mpampiasa vaovao ny AptonCD (ary amin'ny fametrahana azy dia mila Internet ianao amin'ny fotoana iray, tsy manana Internet aho) na programa hafa mitovy karazana nefa mbola mandeha ihany
PS: azafady fa nanao necromancy ianao
Mamaly an'i caco222
Niezaka ny naka ny repoman avy tao amin'ilay rohy aho ary tsy hita izany, ahoana no hahazoako ity programa ity? Misaotra mialoha
Miaraka amin'ny Terminal: Manatsara ny fisehon'ny console (Nohavaozina)